Fanamarihana an-tserasera - pejy 2 29 - Ny Diabe Eran-tany
Nifarana tao Madrid ny World March
05 / 03 / 2020 04 / 03 / 2020 ny Antonio Gancedo
Ny Diabe faharoa ho an'ny fandriampahalemana sy ny tsy fanoloran-tena dia namarana ny fitsidihana tany Madrid. Miala ny 2 Oktobra 2019 (Andro iraisam-pirenena tsy mitongilana) avy any Madrid, ny World March for Peace and Nonviolence dia hamarana ny diany aorian'ny fandalovany mankany amin'ny kaontinanta dimy nandritra ny dimy volana. Miaraka aminy
Tonga ao Trieste ny World March
03 / 03 / 2020 03 / 03 / 2020 ny Antonio Gancedo
Rehefa avy nandalo ny tanànan'i Koper-Capodistria, tao Slovenia, ny 26 febroary dia tonga teto Italia ny Diabe faharoa ho an'ny fandriampahalemana sy ny tsy fandriam-pahalemana. Ny fandaharan'ny fandalovan'ny volana martsa tao amin'ny faritra Trieste dia nihena be noho ny baiko navoaka ho amin'ny vonjy maika amin'ny coronavirus:
Tonga tao Koper-Capodistria ny ekipa base
10 / 03 / 2020 02 / 03 / 2020 ny Antonio Gancedo
Ny 26 Febroary 2020 dia tonga tao amin'ny kaominin'i Koper-Capodistria (Slovenia) ny ekipa fototra alohan'ny nidirany teto Italia. Ny delegasiona, niaraka tamin'ny pacifistiana triecino Alessandro Capuzzo, dia noraisin'ny lefitra lefitra Mario Steffè. Nanatrika teo koa ny fihaonana dia ny Solombavambahoaka lefitra Koper-Capodistria Aurelio Juri
Tonga tao Umag ny ekipa nanam-pahaizana
02 / 03 / 2020 02 / 03 / 2020 ny Antonio Gancedo
Tamin'ny 24 Febroary 2020 dia tonga tao Umag, Kroasia ny ekipa fototra, ary noraisin'ny filoha lefitra roa Mauro Jurman sy i Ivan Ivan Belušić. Ny kaominina dia efa niaraka tamin'ny volana martsa faha-2 ary ny antso mba hanasa an'i Kroasia hanatevin-daharana ny fifanarahana Arms Ban Treaty
Nandalo an'i Roma ny World March
03 / 03 / 2020 02 / 03 / 2020 ny Antonio Gancedo
Nanaporofo ny fankatoavana lehibe tamin'ny Diabe faharoa ho an'ny fandriampahalemana sy tsy herisetra hatramin'ny nananganana azy tamin'ny voalohany, tamin'ny 2 Oktobra 2019 i Roma, tamin'ny fikarakarana hetsika fandefasana andro feno natokana ho an'ny tsy herisetra iraisam-pirenena, miaraka amin'ireo mpikomy ny Amin'ny taona rehetra Mampalahelo fa ny fandalovan'ny volana martsa
Tonga tao Piran ny ekipa Base
28 / 02 / 2020 28 / 02 / 2020 ny Antonio Gancedo
Na dia nofoanana daholo aza ny fivoriana ho an'ny daholobe rehetra (fivoriana miaraka amin'ny sekoly, olompirenena ary ny gazety, noho ny krizy Coronavirus akaiky any Italia), ny ekipa dia voaray tao amin'ny Museum of the Sea an'ny Ben'ny tanànan'i Piran, Genio Zadković, talen'ny serasera. tranom-bakoka, Franco Juri, ary ny filohan'ny Union Italiana (no lehibe
Ireo Martsa ao Fiumicello Villa Vicentina
Tonga ao Fiumicello Villa Vicentina ny ekipa Base. Noho ny fivoahan'ny coronavirus dia tsy afaka nanatanteraka hetsika efa nomanina, ka dia nanapa-kevitra ny hikarakara fihaonana manokana amin'ny delegasiona iraisan'ny World March ho an'ny fandriampahalemana sy ny tsy fandriam-pahalemana. Ao amin'ny Piazza Falcone sy ao amin'ny
Ny Diabe manerantany amin'ny Trieste sy ny manodidina
03 / 03 / 2020 28 / 02 / 2020 ny Antonio Gancedo
Tamin'ny faha-24 izy ireo dia nitsidika an'i Umag, any Kroasia, izay nanasonian'ny ben'ny tanàna ny fidirana tamin'ny volana martsa faha-2. Ny faha-25, nitsidika ny tanànan'i Piran sy ny faha-26 ny tanànan'i Koper, na any Slovenia aza ny ekipa Base. Tamin'ny faha-26, nisy ny fitsidihana natao tany amin'ireo tanàna akaiky tany Italia sy
Ny Diabe Eran-tany any Piran sy Koper
Ny 26 febroary, avy tao Trieste, izay nandany ny alina izy ireo, dia nankany Piran, Slovenia ny mpanao diabe International Base Team, izay nantsoin'ny ben'ny tanànan'izy ireo. Niaraka tamin'ny ekipan'ny promoter Trieste dia nandeha nitsidika ny Ben'ny tanàna Piran, Genio Zadković. Nihaona tao amin'ny Museo del Mar izy ireo ary teo akaikin'ny Ben'ny tanànan'i
27 / 02 / 2020 27 / 02 / 2020 ny Antonio Gancedo
Ireo tantsaha ao amin'ny tsenan'ny tantsaha Agro Romano, ny asabotsy 29 febroary amin'ny 11.00, dia mandamina ny mariky ny olombelona ny Nonviolence any Largo Raffaele Pettazzoni hampiantrano ny Diaben'ny Fihaonambe ho an'ny Fandriampahalemana sy ny tsy Fampandriampahalemana ao Roma ao Tor Pignattara. Hampandray olona ny tantsaha